Video: Adobe Suuq Bek Baare | Martech Zone
Fiidiyow: Baadhe BS ee Adobe
Khamiista, Oktoobar 25, 2012 Arbacada, Oktoobar 24, 2012 Douglas Karr
Gabi ahaanba jecel yahay fiidiyowgaan iyo ololaha, Suuqgeyntu waa BS, laga bilaabo Adobe oo kor u qaadaya Daruuraha Suuqgeynta Adobe. Waxaan hore u qoray qoraaladayda ku saabsan suuq geynta… Walina way i waddaa gebi ahaanba lowska.
Adobe Suuqgeynta Cloud waxay ku siinaysaa xirmo dhammaystiran oo ah Analytics, bulshada, xayeysiinta, bartilmaameedka iyo xalinta maareynta khibradaha websaydhka iyo dashboard-waqtiga-dhabta ah oo isu keena wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ololayaasha suuqgeyntaada. Marka waxaad ka heli kartaa xogta illaa fikradaha ficilka, ka dhaqso badan oo ka caqli badan abid.
Tags: bs qalabkasuuqgeynta bswada hadalka suuq geyntasuuqgeynta waa bslingo suuqgeyntasuuq-geynta suuq-geyntaereyada suuq geynta
Google Ku Xiridda Qoraalka Maamulayaasha Websaydhada